Dareemaha Webka – Windows – Vessoft
Browser ayaa si degdeg ah oo caan ah oo ku haboon joogaan online. Software wuxuu taageeraa tiknoolajiyada casriga ah oo uu leeyahay hawlaha waxtar leh.
browser The lacag la’aan ah oo degdeg ah si loo hubiyo in joogis raaxo leh ee internet-ka. software The falgala dhammaan adeegyada web shirkadda Google.
Mozilla Firefox – mid ka mid ah daalacashada ugu horreysa ee taageerta tikniyoolajiyadda websaydhada cusub. Software-ka ayaa leh astaamo badan oo loogu talagalay joogitaanka ugu raaxada badan internetka.
Maxthon Browser – biraawsar shaqeynaya oo leh astaamaha lagu dhisay gudaha. Software-ka ayaa taageeraya isticmaalka teknolojiyada daruuriga ah waxaana ku jira waxyaabo lagu daro si loo hakiyo xayeysiinta.
Cent Browser – biraawsar lagu beddelay shaqooyinka aan caadiga ahayn ee ku saleysan mashiinka chromium. Bog furaha wuxuu leeyahay ilaalin qarsoodi ah iyo maareyn tab taban.
Chromium – mid ka mid ah daalacashada ugu dhakhsaha badan ee leh matoor awood leh. Software-ka ayaa leh astaamo gaar ah oo loogu talo galay joogitaanka qarsoon iyo amaanka ee internetka.
Tani waa shabakad dhakhso ah oo taageera tiknoolajiyada gaarka ah si degdeg ah loogu dhejiyo bogagga shabakadaha iyo qalabka loogu talagalay raadinta sahlan internetka.
Internet Explorer – biraawsar aasaasi ah oo loogu talagalay nidaamka hawlgalka ee Microsoft. Softiweerka waxaa ku jira qalabyo dhowr ah oo loogu talaggalay inaad ku raaxeysato khadka tooska ah ee internetka.
browser ayaa caan ka Apple Inc. software waxay leedahay farsamooyinka sare iyo qoreysa hawlgalka fudud ee internet-ka.
browser ah in uu leeyahay macmiilku ka dhisay-in torrent, adeegyada gaarka ah Shuclada iyo set ah muuqaalada for sharing fududaynay of files, download of content warbaahinta.
Barta shabakada waxaa loogu talagalay in lagu sugo ammaanka iyo qarsoodiga internetka. Software wuxuu awood u leeyahay in uu codsado gaadiidka soo galaya iyo kuwa socda.
Baidu Browser – Baadhitaan shabakadeed oo ka socda soosaaraha Shiinaha ee caan ka ah Baidu. Softiweerku wuxuu leeyahay dhowr astaamood oo faa’iido leh si loogu noolaado raaxo leh shabakad caalami ah.
browser Web taas oo ay taageertaa heerarka CSS iyo HTML sare. software waxay leedahay wax badan oo qalabka si wax ku ool joogaan shabakada.
Comodo Dragon – biraawsar deg deg ah ayaa diirada lagu saarayaa amniga iyo asturnaanta isticmaale. Software-ku wuxuu xannibayaa bogagga internetka ee xaasidnimada leh, spyware wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad ku xirto kordhinta.
Browser Soonkii oo taageero ka haysto tiknoolijiyad casri ah si ay u booqato website-ka ee Internet-ka. Software wuxuu taageeraa nidaamka bookmarking sare iyo omnibox la tilmaamo.
Browser ayaa functional iyadoo ah modules kala duwan ee tiirka haboon ee internet-ka. Software waxay bixisaa ku furid ee pop daaqadaha iyo disables ka downloads ee images.
Midori – waa fududahay in la isticmaalo biraawsarka taageeraya tiro badan oo qalab ah oo loogu talagalay joogitaanka raaxada ee internetka.
browser Soonkii taas oo uu leeyahay tiro balaadhan oo ah hawlaha aasaasiga ah iyo goobaha badan ee kala doorashada iyo shuruudaha u gaarka ah si aad u isticmaalaysa internetka si fudud.
browser Tani waxay leedahay set oo ah qalab diiradda ammaanka user gaarka ah inta lagu guda jiro fankooda internetka.
Browserku wuxuu ku saleysan yahay mashiinka Chromium oo diiradda saaraya hagaajinta asturnaanta iyo ku dhuumashada dhaqdhaqaaqa dadka isticmaala internetka.
Avast Secure Browser – biraawsar wuxuu ku saleysan yahay matoorka Chromium wuxuuna la imanayaa fidinta iyo dejinta sidii loo hagaajin lahaa asturnaanta iyo amniga internetka.
Avant Browser – biraawsar deg deg ah oo leh fursado fara badan. Softiweerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xayirid xayeysiiska, pop-up-ka iyo tirtirka faylalka ku meel gaarka ah.
Cốc Cốc – biraawsar taageere sare u haaya tab. Softiweerku wuxuu ka soo dejisan karaa maqal iyo muuqaal fiidiyow ah boggag kala duwan oo aan adeegyo la rabin.
browser waxaa loogu talagalay kordhinta xawaaraha iyo hawlgal deggan internet-ka. software waa la jaan qaada goobaha iyo kordhin inta badan Firefox.